ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: ဒူးနာခြင်း သက်သာစေသော အစားအစာများ
ရေးသားသူ may16 at Friday, September 17, 2010
thura September 17, 2010 at 3:29 PM
ခါနာတာ ကိုပျောက်ဖို. ဘာစားသင်.လဲဆိုတာ ရေးပေး ပါအုံးဗျ.....
အနမ်း September 17, 2010 at 8:53 PM
ညီမရေ ဒူးနာတာလေး သက်သာတဲ့အစားအသောက် တွေ သိရတာကျေးဇူးပါနော်...။ ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ
ကိုဇော် September 17, 2010 at 8:55 PM
ပဲ ဘာဂါ ဆိုတာကတော့ ကြားတောင်မှ မကြားဖူးဘူး...။
သိထားတော့လည်း ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေကို မျှဝေ လို့ရတာပေါ့လေ။ ကျေးဇူးပဲ။
Anonymous September 17, 2010 at 11:22 PM
ပါးချောင်ရိုးကြီးတွေထွက်နေတာ ဘာလို့လဲ...ပိန်တာတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူး...တစ်ခုခုလွဲမှားနေလို့ဖြစ်မယ်...သိရင်ပြောပြပါ :P)
မြတ်မွန် September 18, 2010 at 10:33 AM
ရုံပတေသီးလည်း စားရတယ် ထင်တယ်နော်...
may16 September 18, 2010 at 10:56 AM
ဟုတ်တယ် မမြတ်မွန် ဒူးနာတာ ရုံးပတေသီးလည်း စားလို့ရတယ် နွားနို့နဲ့လားမသိဘူး အမ...
pu su September 20, 2010 at 12:03 AM
thank you,i will eat for my kneel.
၀သော အမျိုးသမီးကြီးအများစု ဒူးနာတာ အဖြစ်များပါတယ်။
ဒူးနာရင် နောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ တစ်ခါလျှောက် (၁၀)လှမ်းကနေစပြီး လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။
လှေကားအမြင့်တက်တာ၊ အလေးအပင်မတာတွေကို လျှော့ပါ။
ခိုင်လေး June 29, 2012 at 8:50 PM